Knowledge – Page 26 – Shwe Sar
မျက်ခုံးတွေ ဘာကြောင့်လှုပ်တာလဲ.. လူတိုင်း ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ..
By Shwe SarPosted on January 5, 2021
(အခုမှ အစုံသိရလို့ ကျေးဇူးပါ) မျက်ခုံး ဘာကြောင့်လှုပ်၊ မျက်ကွင်း ဘာလို့ ညို နဲ့ အခြား သိချင်စရာလေးများ မျက်ခုံး ခဏခဏ လှုပ်နေရင် ဘာများဖြစ်မလဲဟု စိတ်ထင့်လာတတ်သည်။ မျက်ကွင်းတွေ ညိုလာပြီဆို တစ်ခုခုများ ဖြစ်တော့မလား […]
သင် မနက်စာမစားဘဲ နေနေပြီလား ဒါဆို ဒီရောဂါတွေ ပိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်
မနက်စာ ကို ရှင်ဘုရင်လို စားသင့်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလေး သင်ကြားဖူးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ပိန်ချင်လို့ အစားလျှော့တယ်၊ ရုံးသွား ကျောင်းသွားရမယ်ဆိုပြီး မအားလို့ မနက်စာကို မစားဖြစ်ကြတဲ့ သူတွေ အများကြီးပါ။တကယ်တော့ မနက်စာဆိုတာ သင်တစ်နေ့တာလုံးအတွက် လိုအပ်တဲ့ အားအင်တွေကို […]
ယခုလတ်တလော ရေပန်းစားနေတာကတော့ ကမ္ဘ့ာဈေးအကြီးဆုံးကော်ဖီအဖြစ်နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဆင်ရဲ့ မစင်နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကော်ဖီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကော်ဖီကိုတော့ ထိုင်းနိုင်ငံက စတ င် ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ဆင်တွေကို အရည်သွေးကောင်းတဲ့ ကော်ဖီစေ့တွေကို သူတို့ရဲ့အစာထဲ ထည့်သွင်းရော စပ်ကျွေးမွေးတာပဲ […]
ဖေဖေ့တုန်းက မသိလိုက်ရလို့ ဖေဖေ့အသက်ကို မကယ် နိုင်ခဲ့ဖူးးးး ဖေဖေ့လို ကင်ဆာသမားများ ရှိနေမလားလို့ပါ စေတနာဖြင့်
ကင်ဆာရောဂါ ကြောက်စရာမလို ယနေ့ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ဓါတ်စာဖျော်ရည်တစ်မျိုး ခေတ်စားနေပါသည်။ လူအများ စိတ်ဝင်စားလာအောင် စတင်ဖော်ထုတ် ဆော်သြ ခဲ့သူကတော့ ဂျပန်ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး အရှင် တိုမီဇာဝ ဖြစ်ပါတယ်။ ထင်ပေါ်ကျော်ကြားလာတဲ့ ဓါတ်စာဖျော်ရည်ကတော့ “အာလူးစိမ်း” ဖျော်ရည်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ […]
သင် ဒီအိပ်မက်တွေ မက်ဖူးရင် ဒါတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးပါပြီ အိပ်မက်ထဲမှာ သွားကျိုးတယ်လို့ မက်ဖူးကြမှာပါ။ ဒါဆို သတိထားစောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒီလို အိပ်မက် မက်ခြင်းက ကောင်းတဲ့ နိမိတ်လက္ခဏာတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါဟာ သင့်အမျိုးထဲက သင့်သူငယ်ချင်းက သစ္စာဖောက်တဲ့ အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်။ […]
ကြက် သွန် နီ ဟာ မြန်မာ တို့ရဲ့ မီးဖိုချော င်တိုင်းမှာ ရှိနေတဲ့အရာဖြစ်ပြီး ဟင်းတိုင်းလိုလိုမှာ ထည့်သွင်းချက်ပြုတ်ကြပါတယ်။ အသုပ်တွေမှာလည်း ထည့်သုပ်ကြသလို ကြော်၍လည်း စား ကြပါတယ်။ ကြက်သွန်ဟာ စားရုံသာမက ဆေးဘက်ဝင်တဲ့အရာလည်း ဖြစ်တာကြောင့် […]
နှစ် သစ်မှာ အိမ်ပိုင်၊ ကားပိုင်နဲ့ နေကြလို သူများအတွက်
By Shwe SarPosted on January 3, 2021 January 3, 2021
နှစ်သစ်မှာ အိမ်ပိုင်နဲ့နေကြရအောင် နော် အိမ်ပိုင်ရှိသူကလည်း ကားပိုင်နဲ့နေကြရအောင်ပေါ့လေ… ၂၀၂၀ က အရမ်းထူးခြားတယ်နော် ကောင်းသောဘက်ဆိုးသောဘက် ၂မျိုးလုံးကို ထူးခြားစေတာ ၂၀ ကို ၂ခါကြွင်းတဲ့ နှစ်လို့ခေါ်တာပေါ့လေ…ထားပါလေ။ ဒီနှစ် ကုန်ဖို့ရာအတွက် ပျမ်းမျှ ရက်က (၄)ရက် […]
By Shwe SarPosted on January 3, 2021
၁။ ကလေးများဥတုအကူးတွင် ချွဲပူထပြီးချောင်းဆိုးရင် ကြပ်ရောဂါဖြစ်လျှင် အိမ်သုံးဆားကို ကွမ်းရွက်တွင် ကန်တော့ထိုး၍ အထုပ်ငယ်လေးများပြုလုပ်ကာ သံပြားပေါ်တွင်တင်၍ မီးအပူပေးပြာချပါ ထိုကွမ်းရွက် + ဆား ပြာကိုသံပရာရည်ဖြင့် ဖျော်၍ တိုက်ပေး၊ လျက်ပေးလျှင် ချောင်းဆိုးရင်ကျပ်ရောဂါ ပျောက်ကင်းစေနိုင်သည်။ ၂။ […]
နာနတ်ရွက်​ တစ်ရွက်က ဒီ​လောက်​ထိ ဆေးစွမ်းထက်မှန်း အခုမှသိ​တယ် (ရှယ်ယူထားလိုက်ပါတော့)
နာနတ်ပင်ဟာဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ် ကာလမှာ နာနတ်သီးရဲ့ ဆေးစွမ်းထက်မြက်ပုံကို သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနပြုနေကြတဲ့ သတင်းများ လည်းရှိနေပါတယ်။ တိုင်းရင်းဆေးဖက်ဝင်တဲ့ နာနတ်သီးကနာနတ်ရွက်လေးတစ်ရွက်နဲ့တင် လူအများ အတွက် ဆေးအသုံးဝင်ပုံလေးကို တင်ပြလိုပါ တယ်။ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ လိုသူတိုင်းအသုံးပြုနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်- (၁) နာနတ်ရွက်(၁)ရွက်ကို ထုထောင်းပြီးညှစ်ရည်(သတ္တုရည်) […]
မိခင် အပေါ်ဆက်ဆံပုံကိုကြည့်ပြီး မင်္ဂလာဦးညမှာ ကွာရှင်းပြတ်စဲခြင်း
မင်္ဂလာဦးညတွင်မင်္ဂလာဦးမောင်နှံအတွက် ညစာစားဖို့လင်ဗန်းအကြီးတစ်ခု၌ အလွန်ကောင်းပြီး အနံ့အရသာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ အစားအသောက်များကို စားသုံးဖို့အခန်းတစ်ခုမှာအဆင်သင့် ပြင်ဆင်ထားပေးတယ်။ သတို့သားက သတို့သမီးကိုစားသောက်ဖို့ခေါ်တော့ သတို့သမီးကမေးတယ်…. ရှင့်အမေကော မစားဘူးလား.…?ခေါ်လိုက်ပါ အတူတူ တစ်ပေါင်းတစ်စည်းတည်း စားလိုက်ကြရအောင် …. သတို့သားက အမေ အိပ်သွားပြီးထားလိုက်ပါ။ငါတို့နှစ်ယောက်ပဲ စားလိုက်ကြရအောင်…ဇနီးက […]